I-China White Quartz Water Flow yendalo eQokelelweyo yamatye ePaneli mveliso kunye nabenzi | I-DFL
Iphaneli yamatye eNdalo eQokelelweyo yeNdawo emhlophe
Unyango umphezulu: Machine-cut
Ukumelana nokukhukuliseka kwesilayiti: I-Antacid
Unyango ngaphezulu:Ukusikwa ngomatshini
Ukumelana nokukhukuliseka kwesilayiti:I-Antacid
Ukuhamba kwamanzi eGrey Quartz Iphaneli yamatye endalozigqibelele yemithombo kunye inobuncwane bokuthungwa kunye nombala obongeza ukuqaqamba okungaphelelwa lixesha kuyo nayiphi na indawo yangaphakathi okanye yangaphandle.
Ukuqinisekisa ukomelela kunye nokusebenza ngokuchaseneyo, iimveliso zamatye endalo zinokusetyenziselwa ukwenza ukujonga okuhlangeneyo kwesitayile esihlala sikho.
DFLstone Iiphaneli zamatye zihambelane nezi mpawu zilandelayo:
Iikhathalo zomkhiqizo: I-Quartz yendalo eQokelelweyo yoMvelisi kunye nomthengisi? Sinokhetho olubanzi kumaxabiso amahle ukukunceda ufumane ubuchule bokuyila. Zonke iiPaneli zaManzi ezihamba naManzi eziQuartz ziqinisekisiwe ngomgangatho. Siyi-China Origin Factory ye-White Quartz eXineneyo yeLitye eliPhezulu. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Inzuzo: 1, iminyaka eli-14 yamava kwishishini lokuthumela ngaphandle kwelitye .I-DFL inkampani yamatye yakha ngo-2004 kwaye igxininise amandla kwilitye lendalo .Inkampani yethu inkqubo iphilile.
Siyi-ISO 9001: 2015 inkampani
2, Uluhlu olupheleleyo luvelisa kwaye ungazithenga kuthi kunye: i-mosaic, i-Flagstone mat, ikholamu yentsimbi, iisill, kunye namatye eengqalutye njl.
3, amaxwebhu aluncedo
Sinethuba elingakumbi kubathengi baseMntla Melika nase Mzantsi Melika .Sinokubanceda ukuba benze amaxwebhu apheleleyo ukuze angenise ngaphandle ngokutyibilikayo. Ye-L / C okanye eminye imigaqo yokuhlawula okanye imigaqo yorhwebo, sinamava apheleleyo.
Iikhathalo zomkhiqizo: Amanqaku emveliso Sinokhetho olubanzi kumaxabiso amahle ukukunceda ufumane ubuchule bokuyila. Zonke iiPaneli zeGrey Stone ziqinisekisiwe ngomgangatho. Siyi-China Imvelaphi yeFektri yeSitayile esiSiseko sePaneli yamatye. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Iphaneli yelitye engwevu yomnqamlezo
30.5 × 30.5cm Black Natural Ingqalutye Ingqalutye kaMoses T ...
30.5 × 30.5cm Popular Honed Natural Stone kaMoses ...
intengiso eshushu umhlwa wangaphandle uhombiso lwamatye okwenyani
Ixabiso elincinci lamatye endalo angaphandle angaphandle ...